Wararka Maanta: Khamiis, Mar 7 , 2019-Rag ku eedeysan qaraxyo ka dhacay magaalada Muqdisho oo maxkamad la horkeenay
Ragga qaraxyadaasi loo heysto ayaa waxaa lagu kala magacaabaa Canshuur Cusmaan Abuukar iyo Maxamed Cali Boorow Aadam,waxaana Maxkamada Ciidamada ay ku eedeysay inay mas’uul ka ahaayeen qaraxyadii ka dhacay Tiyaatarka Qaranka iyo agagaarka Taalada Daljirka Daahsoon.
Guddoomiyaha Maxkamada Darajada 1aad ee Ciidamada Qalabka sida Xasan Cali Nuur Shuute ayaa sheegay in raggaas ay ka tirsanaayeen Al-Shabaab,isla markaana ay u qaabil sanaayeen weerarada loo adeegsado Gawaarida dadka lagu horjaro kadibna la rasaaseeyo iyo sahminta Goobaha ay Shabaab doonayaan inay weeraraan.
Sidoo kale Guddoomiyaha ayaa sheegay in Canshuur Cusmaan Abuukar loo heysto weerar lagu qaaday 15-8-2017 Gaari ay saarnaayeen qoyska Reer Xasan Cabdi Cawad oo ka mid ahaa Madaxda Shirkadda Dahabshiil ,weerarkaas oo ka dhacay agagaarka Digfeer ayaa waxaa ku geeriyooday Maxruum Maxamed Xasan Cabdi Cawad,isla markaana ay ku dhaawacmeen 5 ruux oo qoyskaas ka mid ah.
Waxaa kaloo lagu eedeeyay weerar 27-9-2017 lagu qaaday Gaari ay la socotay Xoghayihii Ururka Haweenka Qaranka Canab Cabdullaahi Xaashi kaas oo ka dhacay degmada Xamarweyne,waxana weerarkaas ku geeriyooday Marxuumad Canab Cabdullaahi Xaashi iyo Wiil ay dhashay Guddoomiyaha Ururka Haweenka Qaranka oo lagu Magacaabi jiray Axmed Jaamac Xersi.
Sidoo kale Raggaas iyo rag kale oo la socday ayaa xeer ilaalinta Maxkamada ciidamada Qalabka sida waxa ay ku eedeysay inay qeyb ka ahaayeen weerarkii qaraxyada ku bilaawday ee Sanadkii 2018 lagu qaaday Hotelka Saxafi ee Magalada muqdisho kaas oo dad badan ay ku dhinteen.
Maxamed Cali Boorow Aadam ayaa isagana loo heystaa qaraxii ka dhacay 2-9-2018 Xarunta degmada Holw-Wadaag ee Gobolkan Banaadir, kaas oo ay ku dhinteen 8 ruux 27 kalena ay ku dhaawacmeen
Guddoomiyaha Maxkamada Darajada 1aad ee Ciidamada Qalabka sida Xasan Cali Nuur Shuute ayaa fadhiga Maxkamada ka sheegay in Maxkamadeynta raggaas dib la isugu soo laaban doono,waxaana xeer ilaalinta uu ka dalbaday inay soo dhameystiraan cadeymaha ay ku hayaan.
3/7/2019 10:36 AM EST